Mmetụta na-enweghị kọntaktị | Shanghai Sunshine Teknụzụ Co., Ltd.
Okpomoku ogwu Miru ala
N'ihi ntiwapụ nke ọrịa ahụ, mmụba okpomọkụ aghọwo akụkụ nke ndụ ndị mmadụ kwa ụbọchị. N'ihi enweghị kọntaktị ya, nzaghachi ọsọ ọsọ ma dị mfe iji, thermometer infrared ejiriwo ọtụtụ ebe na ọnụ ụzọ okporo ụzọ, ụlọ ọgwụ, ebe obibi, ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ pubul. Enwere ike kewaa ngwaọrụ mmakọ infrared a na-ejikarị abụọ: ụdị ihe nyocha ọkụ na infrared thermal thermometers.
Enwere ike iji akụrụngwa ihe eji ekpugharị ihe esiri na-enwu enyo maka ebe ana-ahụ ihe n’ebe ọha na eze nwere ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ. Ọ nwere ike na-akpaghị aka soro na mkpu elu-okpomọkụ ebe, na-arụkọ ọrụ na-ahụ anya video vidiyo ngwa ngwa chọta na soro ndị mmadụ na elu ahu okpomọkụ. Mgbe ọ jikọtara njirimara ihu, nyocha mkpanaka na teknụzụ ndị ọzọ, ọ nwekwara ike ịchọta ozi ndị ọzọ gbasara ndị nwere ogo ahụ dị elu.
Enwere ike ịkekọrịta temomita nke infrared na temometa nke infrared ntị na temometa n'egedege ihu. Igwe ihe omimi nke infrared nwere uru nke owuwu di mfe, ojiji di nma na nzaghachi ngwa ngwa, nke puru ighota usoro ndi mmadu na ndi mmadu ngwa ngwa.
Mmetụta Ọdịmma Industriallọ Ọrụ
Achọrọ itinye ebe a na-akpọ kọntaktị nke ihe mmetụta okpomọkụ dị na mbara igwe nke nchọpụta ahụ, yabụ ọ kwesịrị ịtụle njirimara anụ ahụ nke onye na-ajụ ajụ ka a kpọtụrụ ya, dị ka nrapado, corrosion, wear and so on, as a result, traditional temperautre sensọ na-ejedebeghị na ohere na nchọpụta nso. Ọ bụ ezie na ihe mmetụta infrared thermopile nwere ike ịchọpụta ebe dị anya ma jiri ya mee ihe n'oge anaghị eme eme. Site na njirimara nke dị mfe ibugharị, nke dị mfe iji tụọ, yana nso nso nchọpụta nchọpụta okpomọkụ, a na-ejikarị sensọ infrared infrared thermopile eme ihe n'ụzọ zuru oke na-arụ ọrụ mmezi na mgbochi mmezi ụlọ ọrụ, ma jiri ya mee ihe n'ọtụtụ nchọpụta nke ike eletriki, ụlọ ọrụ, na mmanụ ala, okporo ụzọ, na-ewu ụlọ nchekwa nchekwa na mpaghara ndị ọzọ.